Somaaliyaa fi Caama Ishee Mudate
FAAYILII - Dahoo yeroo namoonni buqahan keessa jiraatan, Muddee 14, 2019
Somaaliyaa keessatti uummanni biyyatti kan walakkaatti dhiyaati caama hamaa ammaan dura argamee hin beeknee mudateen miidhamuu fi biyyattiin hanagi tokko beelaaf saaxilamuu jilli waa’ee gargaarsa dhala namaa kan biyyatti jilli addaa ksisanii jiru.
Moqdishoo keessatti tuuta oduuf Wiixata kaleessaa ibsa kan kennan jilli addaa kan gargaarsa dhala namaa Abdurahman Abdishakur Warsameh akka jedhanti lammiwwan Somaaliyaa Miliyoona 6 caalaatu caama hamaa Kanaan miidhamee jira.
Waarsameh akka jedhanti lakkoobsii namoota rakkoo kana keessa jiranii walakkaa uummata biyyatti ta’uuf ariifataa jira.Caamnii kun konyaalee somaaliyaa 84 keessaa 72 kan dhahee yoo ta’u, isaan kana keessaa konyaan 6 haala beela fakkaatu keessaa kan jiranii fi hanqiinya wabii nyaataa hamaa keessa akka jiran ibsan.
Ummanni keenya du’u jalqabee jira.Duutii jalqabee iddoo tokko tokkootti beellii marsaa jira.Caamniis gara beelaatti geddaramaa jira.Kanaaf lammiwwan somaaliyaa kanneen biyya keessaa ala jiran, itti gaafatama hanga tokko fudhachuun nu gargaaruu qabu.
Lammiwwan meeqa beela irraa kan ka’e akka du’an kan hin ibsiinee aangawaan kun garu gargaarsii kanneen eeggataa jiraniif akka dhaqqabu gaafatan.
Caamnii amma mudatee kun waggoota 40 keessatti isa hamaa ta’u kan ibsan Waarsameeh,lammiwwan somaaliyaa kuma 700 kaneen baadiyyaa biyyatti keessa jiraataa turan gara magaalaalee itti dhiyeenyaisaanii jiranti godaanuun gargaarsa akka barbaaddatan dirqisisee jira.
Tokkummaan mootummootaa fi dhaabattonni caama Kanaan kanneen miidhaman gargaaruuf Doolaara Biliyoona 1.4 kan gaafatan ta’uus, haga ammaatti kan argatan Miliyoona 58 qofa kan jedhan warsameeh gargaarsii addunyaa yeroo ammaa caalaatti weerara dhukkuuba KOOVIID, duula waraanaa Raashaan Yukreen irratti bantee, fi rakkoo Afgaanistaan siriyaa akkasumas Yaman irratti fulleeffatee jira jedhan.